Ogaden News Agency (ONA) – Dowlada Masar oo Kajawaabtay Eedayntii Xukuumada Wayaanaha.
Dowlada Masar oo Kajawaabtay Eedayntii Xukuumada Wayaanaha.
Posted by Dulmane	/ December 29, 2016
Wararka naga soo gaadhaya magaalada Qaahira ee xarunta wadanka Masar ayaa sheegaya in ay dowlada Masar sikulul iga jawaabtay eedayntii ay xukuumada wayaanuhu dusha usaartay.
Wasaarada arimaha dibada ee wadanka Masar ayaa sheegtay in xukuumada Itoobiya ay caalamka usheegtay war aan jirin waxaana hadalka wasaarada kasoo baxay lagu sheegay in aysan dowlada Masar wax lug ah kulahayn arimaha gudaha Itoobiya kajira.
Hadalka kasoo baxay dowlada Masar ayaa lagu sheegay in ay xukuumada Itoobiya eedaynta ay dowlada Masar usoo jeedisay ay uga jeedo arimo siyaasadeed isla markaana aysan jirin kaalin dowlada Masar uga banaan hurinta colaada Itoobiya.
Xukuumada wayaanaha ayaa dhowr jeer oo hore soo saartay hadal ay kusheegayaan in dowlada masaaridu ay tahay mida hurinaysa colaada kasocota gudaha Itoobiya. Dhinaca kale dowlada Masar ayaa markii labaad sheegtay in aysan wax lug ah kulahayn colaada Itoobiya kajirta isla markaana dowlada masar ay kashaqaynayso daganaanshaha Gobolka.
Sanadadii ugu dambeeyay waxaa siixumaanayay xidhiidhka Qaahira iyo Addis Ababa kadib markay xukuumada wayaanuhu xidhay biyihii wabiga Nile kaas oo ay ka faa’iidaysan jireen malaayiin Masaari ah.